Himalaya Dainik » परदेशीले फोनमा सोध्छन् ‘रो’गलेभन्दा भोकले म’रिन्छ जस्तो छ, दिदी प्लेन कहिले चल्छ’
म प्रवासी नेपाली समन्वय समिति ‘पीएनसीसी’ मा काम गर्छु । जसले परदेशमा रहेकाको समस्या सुन्ने र समाधानको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वयको काम गर्छ । यो संस्थामा आवद्ध भएपछि परदेशमा रहेका र उनीहरुका परिवारका गु’नासा सुन्दै, उनीहरुको समस्याको समाधान खोज्दै कयौं दिने बिते । वर्ष बिते ।
तर यसपालि कल्पनै नगरेको स’मस्याले संसारलाई छोप्यो । सामान्य अवस्थामा त कहिले म्यानपावरको झु’टले त, कहिले खाडीको धुपले पोलेका परदेशीलाई को’रोनाले थप नयाँ र कल्पना नै नगरेका स’मस्या थपिदिएको छ । परदेशमा मात्र होइन, को’रोनाले नेपालमा पनि प्रभाव पारेको छ । तर हामी काममा निरन्तर खटिएका छौं । अफिसको फोन मोबाइमा डाइर्भट गरिएको छ ।
बिहानदेखि रातिसम्म अनेक स’मस्या र समाधानको आशासहित फोनमा परदेशबाट नेपालीले घण्टी बजाउँछन् । तर कुनै कुनै फोन यस्ता हुन्छन्, जुन कल्पना गर्दा पनि मन चसक्क हुन्छ । काम नै परदेशीको स’मस्या सुन्ने । तर को’रोना क’हर सुरु भएपछि मैले असाध्यै पी’डा’दायी स’मस्या सुनें । साउदीमा रहेका एक नेपालीको फोन रहेछ । पहिलेजस्तै सोधें, तपाईँलाई कस्तो स’मस्या परेको छ।
उनले भने, ‘को’रोनाको बेला मेरो त सद्दे आँखा देख्न नसक्ने भएँ । उनको समस्याबारे थप सोधें । उनी भन्दै गए । फलाम तताउने कम्पनीमा काम गर्दा रहेछन् । फलामे तारले देब्रे आँखाान चो’ट लाग्यो । कम्पनीले अस्पताल त लग्यो। तर को’रोना म’हामारीका कारण सम्बन्धित विशेषज्ञ भेटिएनन् । आँखाको अ’प्रेशन भयो । तरिका मिलेन या के भयो । सही समयमा डाक्टर नभेटिंदा उनी आँखा देख्न नसक्ने भए ।
आँखा दिनहुँ दुख्छ उनको । दुखाई बढिरहेको छ । अहिले त आँखाभन्दा बढी दुख्ने त कम्पनीको व्यवहार छ । भिसाको म्याद सकियो । साउदीको परिचय पत्र ‘इकामा’ को पनि म्याद छैन । कम्पनीले घर फर्कनले अनुमति ‘एक्जिट परमिट’ दिइसक्यो । साउदीको आईडी नहुँदा अस्पतालमा गएर उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन । घर फर्कन जहाज चल्दैनन् ।
के गर्ने ? उनी मलाई सोध्छन् । यसको जवाफ शायद सरकारले दिनुपर्छ । उनलाई आफ्नो आँखाको ज्योति गु’म्दा घर परिवार चाहिँ अँध्यारो हुने हो कि भन्ने चि’न्ता छ । भर्खर २९ वर्षको उमेर । आँखाले संसार देख्न छोड्यो । घरमा श्रीमती र छोरी उनकै आशमा सुखी संसारको कल्पना गरिरहेका छन् । उनीले भने, ‘म त को’रोना नलागे पनि यही पीरले म’र्छु जस्तो छ ।
भन्छन्, तपाईँले भन्दा हुन्छ भने मेरो नाम पहिलो प्राथमिकतामा राखिदिनुहोस् न, तपाईँले भनेको त सुन्लान्, सरकारलाई मेरो कुरा र समस्या सुनाइदिनुहोस् न । उनले यसो भनिरहँदा लाग्छ, परदेशीले विभिन्न माध्यममार्फत रोइकराइ गरेको सरकारले नसुनेको होला र ! तर उनलाई चाँडै फर्कनु छ । चाँडै घर फर्कन पाए काठमाण्डौका अस्पतालमा आँखा उपचार गराउने उनको योजना छ ।
आँखा जोगाउन सक्थें कि भन्ने मनमा आश छ । यस्तो स’मस्या सुनिरहँदा मन भारी हुन्छ । तर संसार को’रोनासँग आ’क्रान्त भइरहेका बेला परदेशमा ज्यान दाउमा राखेर खटिरहेकाहरुका धेरै स’मस्या ओझेल परेका छन् । अहिले परदेशमा हुने धेरैका आँखाले नेपालबाट उनीहरुलाई लिन आउने जहाज हेर्न अतुर छन् । काम छैन । कमाइ छैन । कम्पनीले एक छाक खान दिएको छ ।
त्यो पनि ठिक छ । तर अहिले को’रोना म’हामारीका बेला परदेशीहरु कहाँ सु’रक्षित साथ बस्न पाएका छन् र। साउदीमै कार्यरत अर्का एक नेपालीले फोनमा सुनाए, ‘क्याम्पमा यति भि’डभा’ड छ, बि’रामी पनि यहीँ छन्, नि’रोगी पनि यही छन्, ड’र यति लाग्छ कि कसरी बसौं ?’ उनलाई विश्व स्वास्थ्य संठगनले अपनाउनका लागि सुझाएका उपायहरु त बताएँ,
तर यसै गर भनेर कसरी भन्नु, यो बेला अर्को ठाउँमा जाने या नेपाल नै फर्कने अवस्था छैन । उनी सुनाउँछन्, कोरोनाजस्ते लक्षण देखिए उनीहरुलाई कम्पनीले क्याम्पभित्रै क्वारेण्टीनमा राख्ने रहेछ । तर जाँच भने नहुने रहेछ । सबैजना त्यसरी बस्नुपर्दा धेरैलाई मानसिक त’नाब सुरु हुन थालेको छ ।
उनी सुनाउँछन्, एउटा साथीको अवस्था अलि नाजुक छ, तर उपचार पाएको छैन, कतै हाम्रो पनि अवस्था त्यस्तै हुने त होइन, हामी ड’राइरहेका छौं । उनी मात्र हैन, स’मस्या सुनाउन फोन गर्ने धेरैजना भन्छन्, ‘म’रिन्छ कि के हो ? परिवारसँग यो जुनीमा भेट हुँदैन जस्तो छ, को’रोनाले भन्दा ड’रले मरिने भइयो । सम्झाउन त म सम्झाउँछु उहाँहरुलाई ।
जति मैले बुझेको छु, त्यति उपाय र बाटाहरु पनि देखाउने कोशिस गर्छु । उनीहरुसँगको कुराकानी सकिएपछि सोच्छु, ‘आफ्नै माटोमा, आफ्नैको काखमा त हामी आ’त्तिएका छौं, सात समुद्रपारी उनीहरुलाई ड’र किन नलागोस् । हामी आफ्नै घरमा त को’रोनासँग ड’राइरहेका छौं । झन् परदेशमा कम्पनीको क्यापमा कोचाकोच गरेर, अरुकै अर्डरमा बाँच्नुपर्दा मन किन नआत्तियोस् !
यस्तै सोच्दासोच्दै कहिले त म आफैं पनि उनीहरुको पी’डामा डुब्दो रहेछु । आफूलाई नै उनीहरुको ठाउँमा राखेर सोच्दो रहेछु । शान्ति सिंह प्रवासी नेपाली समन्वय समितिमा कार्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँको पुरा लेख पढ्नको लागि उज्यालो अनलाईनको अफिसियल वेबसाइत मा गएर पढ्न सकिने छ।
प्रकाशित मिति १३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार २१:१३